08/03/13 ~ Myanmar Forward
Posted by drmyochit Saturday, August 03, 2013, under ဗဟုသုတ | No comments
From: Mizzima - News in Burmese
အင်တာနက်ကြောင့် လူမှုဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပွားနိုင်
Posted by drmyochit Saturday, August 03, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
စုံတွဲများ နှစ်ကိုယ်တူ သဘောတူ ချစ်တင်းနှောစဉ် အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ ရိုက်ကူးထားပြီး နောက်ပိုင်း ၌ အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် လူမှုကွန်ရက် အင်တာနက် စာမျက်နှာများပေါ်သို့ ရောက်ရှိ သွားသော အခါ ဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်သူ ကာယကံရှင်များ သာမက ၎င်းတို့ အသိုင်းအဝန်း၊ မိဘဆွေမျိုးများပါ လှုမှုရေး၊ စီပွားရေး ဆိုးကျိုးများ ခံစားရကြောင်း တွေ့ကြုံခဲ့သူများက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
သမီးရည်စား စုံတွဲများသည် နှစ်ဦးသဘောတူ ဗီဒီယိုရိုက်၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ကြပြီး နောက်ပိုင်း ကွဲကွာ သွား၍ ဖြစ်စေ၊ နှစ်ဦးသဘောတူ နေထိုင်ကြစဉ် တစုံတဦးက ခိုးယူ မှတ်တမ်းတင်ထားသည် ဖြစ်စေ ပြုလုပ် ခဲ့ကြပြီး နောက်ပိုင်းမှ အင်တာနက် စာမျက်နှာများပေါ် တင်ပြ လိုက်သောအခါ အမှုအခင်းများ ဖြစ်ပွား ရကြောင်း၊ ထို့အတွက် အမျိုးသမီးများ နစ်နာရကြောင်း အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားနေသူများက ပြောကြ သည်။ “နှစ်ဦးသဘောတူ အတူတူနေခဲ့ပြီးမှ ဖြစ်လာရင် တာဝန်မယူတဲ့၊ အကျင့်စာရိတ္တ မကောင်း တဲ့ ယောက်ျားတွေမှာ တာဝန် ပိုရှိတယ်။ နှစ်ဘက်စလုံးနဲ့ ဆိုင်တယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးမှာ ထိန်းသိမ်းရမယ့် တာဝန်ရှိ တယ်။ ဗီဒီယိုရိုက် တင်တာကတော့ ယောက်ျားလေးတွေက လုပ်တာ၊ မိန်းကလေးတွေက မသိဘဲ ခံလိုက် ရတာ များပါတယ်။ သူတို့ အခွင့်အရေး ယူလိုက်တာ အမျိုးသမီးတွေမှာ အများကြီး နစ်နာနေ ရပါတယ်” ဟု အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ ဒေါ်ဆူဆန်နာ လှလှစိုးက ဆိုသည်။
တပါးသူ၏ အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်၍ နာမည်ပျက်စေရန် ရည်ရွယ်ကာ ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုဖိုင်များကို အွန် လိုင်းပေါ် ပျံ့နှံ့စေခြင်းသည် ဆိုက်ဘာ ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုအခါ ဆိုက်ဘာ ရာဇ၀တ် မှု ဥပဒေကို ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့က ရေးဆွဲပြီး လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းရန် ပြင်ဆင်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော်၊ မော်ဒယ်လ် စသည်ဖြင့် အနုပညာရှင် များ သည် ၎င်းတို့ အတွဲများဖြင့် နေထိုင်ကာ ဗီဒီယိုရိုက်ကူး အင်တာနက်ပေါ် တင်ခြင်းဖြင့် လူသိပို များလာ ကာ ပို၍ပင် နာမည်ကြီးလာလေ့ရှိကြောင်း၊ အရှက်ရပြီး အနုပညာလောကမှ ထွက်ခွာသွားသူမှာ မဆိုစလောက် သာ ရှိကြသည်။
ယခင်က အနုပညာရှင်များသာ ဗီဒီယိုဖိုင်များ အင်တာနက်ပေါ် တင်ကြသော်လည်း ယခုနောက်ပိုင်းတွင် သာမန် စုံတွဲ များမှ အမျိုးသားများက ၎င်းတို့၏ ချစ်သူ မိန်းကလေးများနှင့် အဆင်မပြေချိန်၊ ကွဲကွာ သွားချိန် များတွင် ချစ်ခင်စဉ်က သဘောတူစွာ ရိုက်ကူးခဲ့သည့် ဗီဒီယိုဖိုင်များကို အင်တာနက်ပေါ်တွင် ဖြန့်ခြင်း၊ စုံတွဲများ အတူနေထိုင်စဉ် ခိုးယူ ရိုက်ကူး၍ အင်တာနက်ပေါ် ဖြန့်ခြင်းတို့ကြောင့် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အသိုင်း အဝိုင်း ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်ကာ အရှက်ရကြရသည်။ “ဒီကိစ္စတွေက အခုမှ ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ ကျမ ဆရာမ ဘ၀တုန်းက တချို့ ပါမောက္ခချုပ်တွေက အတွဲတွေကို အဲဒီလို တွေ့ရင် ပေးစားလိုက်တယ်။ တချို့ ကျတော့ မိန်းကလေးကို သီလရှင် အတင်းဝတ်ခိုင်းတယ်။ တခါတလေ မိဘတွေဆီကို ဆံပင်က တုံးတုံးပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်တာမျိုးတွေ ရှိတယ်။ အဲဒါမျိုးက လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို မလေးစားရာ ရောက်ပြီး အင်မ တန်ကို စော်ကားရာ ကျတယ်။ ဒီလိုအပြုအမူမျိုးကိုတော့ မလုပ်စေချင်ဘူး” ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ ညိုညိုသင်းက ဆိုသည်။
ယခု လဆန်းပိုင်းက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သန်လျင်မြို့နယ် နည်းပညာ တက္ကသိုလ် (သန်လျင် GTC) တွင် ကျောင်း စာသင်ခန်းထဲ၌ စုံတွဲတတွဲ မဖွယ်မရာ ပြုလုပ်နေပုံကို ကျောင်းသားတချို့က ဗီဒီယိုရိုက်ကူး၍ အွန်လိုင်းပေါ် သို့ တင်ခဲ့ရာမှ အများပြည်သူ အာရုံစိုက်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း အဆိုပါကိစ္စကို ပြည်တွင်း သတင်း စာနှင့် ဂျာနယ်တချို့ကပါ ဖော်ပြလာခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဖော်ပြရာတွင် သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်တချို့၏ ဖော်ပြချ က်မှာ သက်ဆိုင်သူများကို ထိခိုက်ကြောင်း၊ ကျင့်ဝတ်နှင့် မညီကြောင်း စသည့် ဝေဖန်ချက်တချို့ ထွက်ပေါ် လာသည့် အပြင် အဆိုပါ နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသားများက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
မကွေးမြို့တွင်လည်း သမီးရည်းစားနှစ်ဦး သားမယားအဖြစ် အတူနေထိုင်ခဲ့စဉ်က ရိုက်ကူးခဲ့သည့် ဗီဒီယိုဖိုင် ကို အင်တာနက် တွင် တင်ခဲ့သည်ဟု ယူဆရသူအား အမှုဖွင့်ပေးရန် ကာယကံရှင် မိန်းကလေးက တောင်း ဆို လာသောကြောင့် ယင်းအမှုကို လက်ခံထားကြောင်း မကွေးမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးက အတည်ပြု ပြောဆို ခဲ့သော် လည်း ယင်းဖြစ်စဉ်ကို အသေးစိတ် ရှင်းပြရန် ကိုမူ ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
ယင်းဖြစ် စဉ်နှစ်ခုမှာ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူသိများသည့် ဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပြီး ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်စဉ် များစွာ လူမှု ကွန်ရက် အင်တာနက် စာမျက်နှာများတွင် ပျံနှံ့လျှက် ရှိသည်။
မကြာသေး မီ လပိုင်းအတွင်းကလည်း ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ မြို့နယ်တခုတွင် အလားတူ ဖြစ်ရပ်တခု ဖြစ်ပွား ခဲ့သေးသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်မှာ သမီးရည်းစားနှစ်ဦး သဘောတူ ရိုက်ကူးခဲ့သည့် ဗီဒီယိုဖိုင်များကို နှစ်ဦးပြတ်စဲချိန်တွင် အင်တာနက်ဆိုင် တဆိုင်သို့သွား၍ နှစ်ဦးသဘောတူ ဖျက်ခဲ့ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် အမျိုးသားဖြစ်သူက Recover ဖိုင်ကို ပြန်လည်ရယူ၍ အွန်လိုင်းသာ မကဘဲ၊ ဗီဒီယိုအခွေများ အဖြစ် မြို့နယ်တွင်း ဖြန့် ခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် မိန်းကလေးဖြစ်သူမှာ များစွာ နစ်နာခဲ့ရပြီး အမှုဖွင့် တရားစွဲဆိုလျှင်လည်း ဂုဏ်သိ က္ခာ ပိုမိုကျဆင်းမည် စိုးသောကြောင့် အမှုမဖွင့်တော့ဘဲ မြို့နယ် ရဲအရာရှိရှေ့၊ မိဘများရှေ့တွင် အမျိုးသားဖြစ်သူဘက်က နစ်နာကြေးပေး၍ နောက်နောင် ထိုသို့ ထပ်မံမလုပ်ရန် ခံဝန်လက်မှတ် ရေးထိုး စေခြင်းဖြင့် ပြီးစီး သွားခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ဗီဒီယိုရိုက်ကူးပြီး အများသိစေရန် ဖြန့်ဝေမှုသည် ရိုက်ကူးခံရသူများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေသောကြောင့် ကျူးလွန်သူကို ထိရောက်စွာ အရေးယူ ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် အမျိုး သမီးဖြစ် ပါက တဘ၀လုံး အရှက်ရ နစ်နာ စေသော ကြောင့် အရေးယူပေးရန် အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းများကို တိုက်တွန်းလိုကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ ညိုညို သင်းက ပြောသည်။
သန်လျင် GTC ဗီဒီယိုဖိုင် ပျံ့နှံ့သွားသောကြောင့် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခံခဲ့ရသူ ကျောင်းသားနှင့် ကျောင်းသူတို့ကို မိဘများနှင့် အတူ ကျောင်းအုပ်ကြီး ရုံးခန်းတွင် ခေါ်ယူသတိပေး ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းဗီဒီယိုဖိုင်ကြောင့် ကျောင်းဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းရသကဲ့သို့ ကျောင်းသူများမှာလည်း အရှက်ရဖွယ် အပြုအမူများနှင့် စနောက်ခံခဲ့ရကြောင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ် ကျောင်းသူ မသန္တာက ပြောသည်။ “အခုက ကျမတို့ ယူနီဖောင်းကို မြင်ရင်တောင်မှပဲ ဒါက GTC က ဟာတွေပါကွာ ဆိုပြီး သူငယ်ချင်း ထဲမှာတောင်မှပဲ စချင်နောက်ချင်တဲ့ သူတွေ ရှိလာတယ်။ ရပ်ကွက်တွေထဲ သွားရင်လည်း အပြင်လူတွေက စချင်တယ်” ဟု သူ၏ အတွေ့အကြုံကို ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
မကွေးဖြစ်စဉ်မှာ ရဲဇာနည် အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြချက်အရ မေလ ၂၃ ရက်နှင့် ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့ များက သားမယား အဖြစ် နေထိုင် ဆက်ဆံခဲ့စဉ် ရိုက်ကူးထားသည့် ဗီဒီယိုခွေကို ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့က မိန်းကလေး ဖြစ်သူထံ ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ကာယကံရှင် မိန်းကလေးမှာ ရှက်၍ မန္တလေးသို့ ထွက်သွားခဲ့ကြောင်း၊ မန္တလေးတွင် နှစ်ပတ်ခန့် နေခဲ့ပြီး မကွေးသို့ ရောက်ရှိကာ အလုပ်ပြန်ဝင်ခဲ့စဉ် အဆိုပါ ဗီဒီယိုဖိုင်သည် အင်တာနက် ၀က်ဘ်ဆိုက် တခုတွင် တင်ထားသည်ဟု သိရှိရ၍ မိန်းကလေးက မကွေးမြို့ မြို့မရဲစခန်းသို့ သွားရောက် တိုင်တန်း အမှုဖွင့်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သန်လျင် GTC ကျောင်းသား စုံတွဲတတွဲ၏ အနေအထိုင် မဆင်ခြင်မှုကြောင့် ကျောင်းသား အားလုံးကို ၀ါးလုံးရှည်ဖြင့် သိမ်းရမ်းခြင်းမျိုး မပြုလုပ်သင့်ကြောင်း၊ ဗီဒီယို ရိုက်ကူးသူနှင့် အွန်လိုင်းပေါ် တင်ခဲ့သူတို့ကိုလည်း ရှုတ်ချကြောင်း၊ ဘယ်သူမပြု မိမိမှုသာ ဖြစ်သောကြောင့် မိန်းကလေး ကျောင်းသူများအနေဖြင့် အနေအထိုင် ဆင်ခြင်စေလိုကြောင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား အသိုင်းအ၀န်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ဒီကိစ္စကြောင့် ပညာပေး အစီအစဉ်နဲ့ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး အစီအစဉ်တွေ လုပ်သွားမယ်။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ဖို့အတွက် အတန်းပြီးတာနဲ့ အခန်းကို သော့ခတ်တယ်၊ စစ်ဆေးရေး လုပ်တယ်။ လုံခြုံရေး အပိုင်းမှာလည်း တိုးထားတယ်။ အချင်းချင်း ပြန်ထိန်းတာတွေ လုပ်နေတယ်” ဟု သန်လျင် GTC ကျောင်းသား ကိုကျော်ဇင်ထက်က ရှင်းပြသည်။
ပညာပေးသည့် အနေဖြင့် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်သော ယူနက်စကိုက သန်လျင်နည်းပညာ တက္ကသိုလ် တခုတည်းကို ရွေးချယ်၍ လူငယ်မြှင့်တင်ရေး ပုံစံ ၄ ရက် သင်တန်းပေးရန် ကမ်းလှမ်းလာသည်ဟုလည်း သူက ပြောသည်။ “ကျနော်တို့ တကျောင်းတည်းကို သင်တန်းလာပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းထားတာ ရှိတယ်။ Central Hotel မှာ စက်တင်ဘာလထဲမှာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ သင်တန်းကို ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ သပ်သပ်စီ ခွဲပေးမှာ” ဟု ကိုကျော်ဇင်ထက်က ဆိုသည်။
သန်လျင် GTC သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျောင်းသားစုံတွဲ နှစ်ဦး၏ ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ကျောင်းအုပ်ကြီးက ကျောင်းသား မိဘများအား ပရိုဂျက်တာဖြင့် ပြသခဲ့သောကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးကို နုတ်ထွက်စာ တင်ခိုင်းထားသည်ဟူ၍ အပတ်စဉ်ထုတ် မြန်မာသံတော်ဆင့် ဂျာနယ်က ရေးသားဖော်ပြခဲ့သော်လည်း ယင်းကဲ့သို့ ပရိုဂျက်တာဖြင့် ပြသခြင်းမရှိဟု နည်းပညာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများက ငြင်းဆိုသည်။
ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးက ကျောင်းတွင် ပြသခဲ့ခြင်းလုံးဝ မရှိကြောင်း၊ ကာယကံရှင် ကျောင်းသား ကျောင်းသူ နှစ်ဦးမှာလည်း ကျောင်းအုပ်ကြီးက မိဘများကို ခေါ်ယူ သတိပေးခဲ့ပြီးနောက်ရက်တွင် သူတို့သဘော ဆန္ဒအလျောက် ကျောင်းထွက်သွား ခဲ့ကြောင်း ကျောင်းသားအသိုင်းအဝန်းမှ သိရသည်။ မြန်မာသံတော်ဆင့် ဂျာနယ်အနေဖြင့် GTC ကျောင်းကိစ္စ သတင်းဖော်ပြမှုတွင် ကာယကံရှင် ဖြစ်သူများကို ထိခိုက်စေလိုသော ဆန္ဒမရှိဘဲ ကျောင်းသားထုဘက်မှ ရပ်တည်၍ ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေး ညံ့ဖျင်းမှု၊ အစိုးရ၏ ကိုင်တွယ်ပုံ ညံ့ဖျင်းမှုများကို ထောက်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ယင်းဂျာနယ်တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာ ဦးပြည့်စုံထွန်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ဒီသတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော်တို့မှာ သက်သေ အထောက်အထား အခိုင်အလုံ ရှိပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူကလည်း တကယ်ပြောတာပါ” ဟု သူက ဆိုသည်။
ယခုနောက်ပိုင်းတွင် လူငယ်များမှာ လွတ်လပ်စွာ နေထိုင်လာကြပြီး Living Together နေထိုင်မှု ပုံစံ များပြားလာကြောင်း၊ သို့သော် မိမိတို့မှာ မြန်မာအမျိုးသမီး ဖြစ်သည်ကို မမေ့သင့်ကြောင်း၊ စာသင်ကျောင်းများ တွင်လည်း ယဉ်ကျေးမှု ထိန်းသိမ်း ရေးကို ဘာသာရပ်တခု အနေဖြင့် ထည့်သွင်း သင်ကြားခြင်းဖြင့် လူငယ်များ လျှပ်ပေါ်လော်လီသောစိတ် နည်းသွားကာ
မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းရာ ရောက်နိုင်ကြောင်း အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ ဒေါက်တာခင်ဥမ္မာက အကြံ ပြုသည်။ “ကိုယ့်မှာ ရှိရမယ့် ဟီရိသြတ္တပတရားနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကိုတော့ လက်မလွှတ်စေချင်ဘူး။ ကိုယ်က မြန်မာ အမျိုးသမီး တယောက် ဆိုတာကို မမေ့စေချင်ဘူး။ ငါမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာ သိမယ်ဆိုရင် မဖြစ်သင့်တာတွေ မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့” ဟု သူကဆိုသည်။
မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် အမျိုးသမီးများ၏ တာဝန်များစွာ ရှိကြောင်း၊ လူမှုရေးတာဝန်၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ တာဝန်၊ အိမ်တွင်းမှုဆိုင်ရာ တာဝန်များ ရှိနေသောကြောင့် ခေတ်ပြောင်း လာသော်လည်း လူ့အဖွဲ့အစည်းက ပေးအပ်ထားသော တာဝန်များ ရှိနေဆဲသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် မိန်းကလေးများ အနေဖြင့် အနေအထိုင် အသွားအလာ ဆင်ခြင်ကြ စေ လိုကြောင်း ဒေါက်တာညိုညိုသင်းက ပြောဆိုသည်။
ကုန်သင်္ဘော ခါးကျိုးပြီး ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း နစ်မြုပ်
Posted by drmyochit Saturday, August 03, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ဟင်္သာတ၊ သြဂုတ် ၂
ဟင်္သာတခရိုင် မြန်အောင်မြို့ အမှတ် (၆) ရပ်ကွက် ဂုန်လျှော်ဂိုဒေါင် လမ်း မြစ်ကမ်းနှင့် ကိုက် ၅၀ ခန့်အကွာ ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့ ည ၇ နာရီ ဝန်းကျင်တွင် မြစ်ကျောက်များ တင်ဆောင်လာသည့် ကုန်တင် ရေယာဉ် တစ်စင်း ခါးကျိုး နစ်မြုပ်ကြောင်း မျက်မြင်များထံမှ စုံစမ်း သိရှိရသည်။
အဆိုပါ ရေယာဉ်မှာ ပြည်တွင်း ရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေးပိုင် မြင်းကောင်ရေ ၂၅၀ အားရှိ နောက်တွန်း သံထည် တစ်ထပ် ရေယာဉ် ဖြစ်ကြောင်း သွားရောက် ကြည့်ရှုခဲ့သည့် ယင်းရပ်ကွက် တာဝန်ရှိသူက ပြောကြားသည်။
ကျပ် ၁၅ သိန်းခန့် တန်ဖိုးရှိ မြစ်ကျောက် ၈၇ ကျင်း (တန်ချိန် ၃၄၈ တန်) တင်ဆောင်လာသော ရေယာဉ် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ယင်းရေယာဉ်ပေါ်တွင် ရေယာဉ် မောင်းနှင်သူ အပါအဝင် ငါးဦး လိုက်ပါ လာပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှိုင်မြို့နယ်နှင့် သာကေတ မြို့နယ် မှ နှစ်ဦး၊ ပြည်မြို့မှ တစ်ဦး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လပွတ္တာ မြို့နယ် မှ နှစ်ဦး ဖြစ်ကာ ထိခိုက် ဒဏ်ရာ မရရှိကြောင်း မြန်အောင်မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရုံးမှ စုံစမ်း သိရှိရသည်။
အမေရိကန်ခရီးသွားတွေ AL-Qaida သတိထား
Posted by drmyochit Saturday, August 03, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
အယ်လ်ကိုင်းဒါး အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုကို သတိထားဖို့အတွက် ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာ ရှိတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ သားတွေကို အမေရိကန် အစိုးရက ခရီးသွား သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
အကြမ်းဖက် အန္တရာယ်ကို အထူးသတိထားရမယ့် ဒေသတွေဟာ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းဒေသနဲ့ မြောက်ပိုင်းအာဖရိက ဒေသဖြစ်တယ်လို့ သောကြာနေ့မှာ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
တိုက်ခိုက်မှုတွေ လုပ်လာနိုင်တဲ့ ဒေသကတော့ အာရေဗျ ကျွန်းဆွယ် ဒေသလို့ လည်း ပြောပါတယ်။ ဒီသတိပေးချက်ထဲမှာ တိုက်ခိုက်မှုတွေကို အခု အချိန်ကစပြီး သြဂုတ်လကုန်အတွင်း အယ်လ်ကိုင်းဒါးနဲ့ သူနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကနေ အချိန်မရွေးလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံကလည်း လုံခြုံရေး အခြေနေကြောင့် ယီမင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ သူ့ရဲ့ သံရုံးကို တနင်္ဂနွေနဲ့ တနင်္လာနေ့တွေမှာ ပိတ်ထားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ မူစလင်တွေရဲ့ Ramadan ဥပုသ်လ နောက်ဆုံးရက်တွေမှာ လုံခြုံရေးအတွက် အဓိက စိုးရိမ်တယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
အခုအချိန်အထိ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မယ့် အထောက်အထားတွေ မတွေ့ရသေးပေမယ့် အီးယူ ဥရောပသမဂ္ဂဟာ အမေရိကန်အရာရှိတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး လိုအပ်တဲ့ အရေးယူမှုတွေ လုပ်ဆောင်နေပြီလို့ ဥရောပကော်မရှင်ပြောခွင့်ရ Alexandra Polack က သောကြာနေ့မှာ ပြောပါတယ်။
ကြာသပတေးနေ့ကတော့ အမေရိကန်အစိုးရက လုံခြုံရေး အတွက် တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ကမ္ဘာတလွှားက အမေရိကန် ကောင်စစ်ဝန်ရုံးတွေနဲ့ သံရုံးတွေကို ပိတ်ထားမယ်လို့ ကြေငြာခဲ့တာပါ။ ဒီသံရုံးတွေဟာ ပုံမှန်အတိုင်းဆို တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ဖွင့်လေ့ရှိပါတယ်။ မူဆလင်တိုင်းပြည်တွေမှာ တနင်္ဂနွေနေ့ဟာ ရုံးဖွင့်ရက်ဖြစ်ပေမယ့် ဒီနိုင်ငံတွေက အမေရိကန်သံရုံးတွေနဲ့ ကောင်စစ်ဝန်ရုံးတွေကိုပါ ပိတ်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လင်မယားချင်းစကားများရာက မယားကိုဓါးဖြင့်ခုတ်ပြီး မိမိကိုယ်ကို ကြိုးဆွဲချသတ်သေ
Posted by drmyochit Saturday, August 03, 2013, under မှုခင်း | No comments
၂-၈-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၅၀၀ အချိန် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြေပုံမြို့၊ ကံသာထွက်ဝရပ်ကွက်နေ မောင်ယေ (၂၅)နှစ်နှင့် ဇနီးဖြစ်သူ မဌေးချေ(၂၂)နှစ်တို့ ၂ ဦး လင်မယားချင်းစကားများရာမှ မောင်ယေက ဓါးနှင့်ခုတ် သဖြင့် မဌေးချေတွင် ဦးခေါင်း၊ လည်ပင်းနှင့်ယာလက်တို့၌ ပြတ်ရှဒဏ်ရာများ ရရှိကာသေဆုံးခဲ့သည်။ ထို့နောက် မောင်ယေအားလိုက်လံရှာဖွေရာ နေအိမ် အိပ်ခန်းအတွင်း၊ ထုတ်တန်း၌ တီဗွီအန် တီနာ ကြိုးဖြင့်ကြိုး ဆွဲချသေဆုံးနေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရသောကြောင့် မြေပုံနယ်မြေ ရဲစခန်း(ပ)၁၀၄/၂၀၁၃၊ ပြစ်မှု ပုဒ်မ ၃၀၂ နှင့် သေမှုသေခင်းအမှတ်စဉ်(၆/၂၀၁၃)တို့ဖြင့် အမှုဖွင့် စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မလေးရှားရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများ အလိမ်ခံရ
Posted by drmyochit Saturday, August 03, 2013, under ပြည်ပရောက်မြန်မာသတင်းများ |2comments
မလေးရှားနိုင်ငံမှာ နေထိုင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရဖို့အတွက် တရားမ၀င်နေထိုင်ကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ မှတ်ပုံ တင် ရာမှာ ကြားခံပွဲစားတွေက အထောက်အထားအတုတွေနဲ့ လိမ်ညာမှုကြောင့် မြန်မာတွေ နစ်နာေ နပါတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံကို တရားမ၀င် ၀င်ရောက်လာတဲ့ မြန်မာအပါအ၀င် နိုင်ငံခြားသား အလုပ် သမားတွေ အတွက် အစိုးရကနေ 6P ခေါ် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အစီအစဉ်ကို အရင်နှစ်တွေကနေ စတင် ဆောင် ရွက်နေ တာ ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအစီအစဉ်မှာ မှတ်ပုံတင်တာ၊ တရားဝင်အဖြစ် လုပ်ဆောင်တာ၊ လွတ်ငြိမ်း ချမ်း သာခွင့် စီစဉ်တာ၊ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်တာ၊ အရေးယူတာနဲ့ နယ်နှင်ဒဏ်ပေးတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီအစီ အစဉ်ကို မလေးရှား ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးက လုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီး တရားမ၀င် အလုပ် သမားတွေ မှတ်ပုံ တင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို မှတ်ပုံတင်ရာမှာ အထောက်အထားအတွက် ကြားခံဆောင်ရွက်တဲ့ ပွဲစားတချို့က လိမ်ညာမှုတွေ၊ သတ်မှတ်ငွေ ထက် ပိုကောက်ခံတာတွေ ရှိခဲ့ပြီး မြန်မာအလုပ်သမားတွေ နစ်နာ နေကြပါတယ်။
မလေးရှား အလုပ် သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်(အမ်တီယူစီ)က ရှေ့နေ ပီတာကန်ဒီးယား (Peter Kandiah) ကတော့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေအတွက် ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အဖွဲ့တွေ ထုတ်ပေးထားတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ ဟာ အတုဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သံသယရှိတဲ့အတွက် မလေးရှား လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး နဲ့ ပြည်ထဲရေး ကို စစ်ဆေးရေးဖို့ ဩဂုတ် ၂ ရက်နေ့က ပေးပို့လိုက်တယ် လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီစာရွက်စာတမ်းတွေကို ကိုင်ဆောင်နေတဲ့သူတွေ မကြာခဏ အဖမ်းခံရတဲ့အတွက် အခုလို သံသယရှိတာ ဖြစ်ပြီးတော့ မြန်မာသံရုံးအပါအ၀င် မလေးရှားရဲ၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး တွေက တစုံတရာ လုပ်ဆောင်ပေးတာ မရှိဘူးလို့ အခုလို ပြောပါတယ်။“အလုပ်သမားတွေ အများကြီးကို ထိခိုက်ပါတယ်၊ သူတို့ပိုက်ဆံတွေ ကောက်တာက မမှားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပိုက်ဆံကောက်ပြီးတော့ သူတို့ဆီမှာ ဘာကြောင့် အလုပ်လုပ်ခွင့် မရှိရတာလဲ၊ ဒါဟာ ကျနော်ရဲ့မေးခွန်းပါ၊ တကယ်အမှန်အကန်ဆိုရင်တော့ အလုပ်သမား တွေဆီမှာ အလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမစ် ရှိရပါမယ်။ မြန်မာသံရုံးကလည်း ဒီကိစ္စကိုသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မစစ်ဆေးပေးပါဘူး။ မလေးရှား လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ ရဲတွေလည်း သိပေမယ့် မစုံစမ်းပေးပါဘူး။”
မလေးရှားအခြေစိုက် မဟာနန်းလုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီနဲ့ တခြားအဖွဲ့တွေက ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ အထောက်အထားတွေကို စစ်ဆေးဖို့ ပြည်ထဲရေးကို ပေးခဲ့တယ်လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
မပါာနန်းလုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီနဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဦးကျော်သူရထွေးကတော့ မှတ်ပုံတင်ခဲ့တာ နှစ်ချီ ကြာမြင့်ခဲ့ပေမယ့် အလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမစ် မပေးခဲ့သလို မလေးရှားရင်းဂစ် ၅၄၂၀ ကို ပေးသွင်းခဲ့ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ကျနော်ကတော့ အခုနောက်အပတ်မှာ သံရုံးကိုသွားပြီး သွားမေးတယ်။ သူများနိုင်ငံမှာဆိုတော့ အားကိုးစရာ သံရုံးပဲ ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ လက်ထဲမှာ လက်ရှိ စာအုပ်မရှိဘူး။ စာအုပ်မရှိတဲ့ အချိန်မှာ ကျနော်တို့ ရဲစခန်းမှာသွား တိုင်ဖို့ကလည်း တော်တော်များများ ကြောက်ကြတယ်။ စာအုပ်မရှိလို့ ဖမ်းသွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ အကုန်လုံးက ရက်တွေ ကျော်နေတယ်။ သံရုံးသွားတိုင်တော့လည်း သံရုံးက ဘာမှ မလုပ်ပေးဘူး။ အထက်လူကြီးတွေ တာဝန်ယူပြီး ဖြေရှင်းပေးဖို့ သင့်တယ်။ အလိမ်ခံထားရတဲ့သူတွေက မနည်းဘူး။ ဒီစာအုပ်တွေ မရှိဘူးဆိုတော့ ကျနော်တို့ ဘယ်လိုဆက်လုပ်တော့မလဲ။ ရဲတွေ့ရင် အဖမ်းခံရတော့မှာ။”
မလေးရှားမှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ မဟာနန်းလုပ်ငန်းစု ကုမ္ပဏီပိုင် စားသောက်ဆိုင်ဟာလည်း စစ်ဆေးရေးဝင်တာကို အကြောင်းပြပြီးတော့ ပိတ်ထားတာ လနဲ့ချီ ကြာသွားပြီလို့လည်း ဆိုပါတယ်။
မဟာနန်းလုပ်ငန်းစု ကုမ္ပဏီနဲ့ မြန်မာသံရုံးတို့အကြား ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တာတွေ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း ဟာလည်း မလေးရှားရောက် မြန်မာအလုပ်သမားတွေအကြား ပျံနှံနေ ပါတယ်။
ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး မလေးရှား မဟာနန်းလုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီနဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးကို ဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမယ့် ဖုန်းကိုင် ဖြေကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။
မလေးရှားမှာ တရားဝင် အလုပ်သမား ၃ သိန်းနဲ့ တရားမဝင် လေးသောင်းလောက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မင်းဓမ္မပန်းကွင်းကို စည်ပင်အင်အား ၆၀၀ ခန့်ဖြင့် ခြံစည်းရိုးခတ်ရာမှ ပန်းကွင်းအတွင်း လုပ်ကိုင်သူများနှင့် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွား
ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက အခြေအနေကို လာရောက် ထိန်းသိမ်းနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ကြည်နိုင်)
ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ ပန်းဥယျာဉ်နှင့် အားကစား ကွင်းများဌာန စာတန်းပါ အင်္ကျီ ၀တ်ဆင် ထားသော ၀န်ထမ်းအင်အား ၆၀၀ ခန့်သည် ရန်ကုန်မြို့၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် အတွင်းရှိ မင်းဓမ္မပန်းကွင်းကို သြဂုတ် ၂ ရက်၊ နံနက် ၂ နာရီခန့် ကတည်းက ယာဉ် ၁၂ စီးဖြင့် လာရောက်၍ ကတ္တရာ ပီပါခွံ ဟောင်းများဖြင့် ခြံစည်းရိုး ကာရံခဲ့ရာမှ ပန်းကွင်းအတွင်းရှိ ဆိုင်ခန်းများတွင် နေထိုင်လုပ် ကိုင် နေသူ များနှင့် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
''ည ၂ နာရီလောက်မှာ စည်ပင်ကကား ၁၂ စီးလောက် ရောက်လာပြီး ခြံစည်းရိုးခတ်ဖို့ လုပ်တယ်။ အထက်က ညွှန်ကြားလို့ နာရီဝက်အတွင်း အပြီးခြံစည်းရိုး ခတ်ရမှာလို့ သူတို့က ပြောတယ်။ ဒီလိုခြံစည်းရိုး ခတ်မယ်လို့ ကြိုအကြောင်း ကြားထားတာလည်း မရှိဘူး။ အပေါက်သုံးပေါက်က လူမ၀င်တဲ့ အပေါက်ပဲ ချန်ပြီး ၀င်တဲ့အပေါက်ကို ပိတ်ဖို့လုပ်တော့ မလုပ်ဖို့ ကျွန်မတို့ တားကြတယ်။ သူတို့က ပိတ်မယ်။ ကျွန်မ တို့က မပိတ်နဲ့ ပြောရင်းနဲ့ မနက် ၈ နာရီလောက်မှစပြီး ခဲတွေနဲ့ ပစ်တာတို့၊ ၀ါးတုတ်တွေနဲ့ ရိုက်တာတို့ လုပ် လာကြ တယ်။ မိန်းကလေးတွေကို အရှေ့ကထားပြီး ယောက်ျားလေးတွေက အနောက်က တွန်းတာ။ တွန်းရာ ကနေ ရိုက်နှက်မှုတွေ စဖြစ်ကြတယ်။ သူတို့လူကြီးတွေက အနောက်ကနေ ချချဆိုပြီး ခိုင်းကြ တယ်'' ဟု ပန်းမင်းသား သစ်ခွဆိုင်မှ ဆိုင်ရှင် ဒေါ်ကေသွယ်စိုးက ပြောကြားသည်။
ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု ဖြစ်စဉ်ကြောင့် ဒဏ်ရာရသူ တစ်ဦးကို တွေ့ရစဉ်
ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားသည့်အတွက် ပန်းကွင်းအတွင်း လုပ်ကိုင်သူများထဲမှ လေးဦးခန့် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး မြောက်ဥက္က လာပ ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ထားကြောင်း ပန်းကွင်းအတွင်း လုပ်ကိုင်သူများက ဆိုသည်။ မင်းဓမ္မပန်း ကွင်းရှိ အလုပ်သမား တစ်ဦးကလည်း ''သူတို့ဝါးတွေကို ချွန်ပြီးထိုးလို့ ဒဏ်ရာရတဲ့ သူတွေရှိ တယ်'' ဟုဆိုသည်။
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ရဲမှူးသန်းနိုင်က ''ဒီမှာ ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ ရောက် လာတာပါ။ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ပါ။ စည်ပင်က သူတို့အပိုင်းကို သူတို့ ခြံစည်းရိုး ခတ် တာပါ။ ဒီက ပန်းဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေက အခတ်မခံဘူး။ နောက်တော့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ စည်ပင် သာယာ ၀န်ထမ်း ခုနစ်ယောက်လောက် ဒဏ်ရာရသွားလို့ အင်းစိန်ဆေးရုံမှာ တင်ထားတယ်လို့ သိရတယ်'' ဟုဆို သည်။
ပန်းဥယျာဉ်နှင့် အားကစားကွင်းများ ဌာနမှ ဌာနမှူးနှင့် အဖွဲ့က မင်းဓမ္မပန်းကွင်းကို မဟုတ်ဘဲ ပန်းကွင်း၏ အပြင် ဘက် လမ်းပခုံးကို ခြံစည်းရိုး လာရောက်ခတ်သည်ကို ပန်းကွင်းအတွင်း လုပ်ကိုင်နေသူများက စည်ပင် ၀န်ထမ်း များကို ခဲဖြင့်ပေါက်ခြင်း၊ တုတ်ဖြင့်ရိုက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သဖြင့် ၀န်ထမ်းအချို့ ခေါင်း ကွဲခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း၊ ထို့အတွက် ရိုက်နှက်သူများကို စည်ပင်ဘက်က တရားစွဲဆိုမည်ဟု အဆိုပါ ဌာနမှ တာ ၀န်ရှိသူ တစ်ဦးက သြဂုတ် ၂ရက် နေ့လယ်ပိုင်းက ပြောကြားသည်။
မင်းဓမ္မပန်းကွင်းမှာ ရန်ကုန်မြို့၏ ဒုတိယစီးပွားရေး ဗဟိုဌာန ပြုလုပ်ရန် နေရာဖြစ်သောကြောင့် အဆိုပါ ပန်းကွင်းမှ ဆိုင်ခန်းများကို ဒေါပုံမြို့နယ် ယမုံနာပန်းကွင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ရန် ပြောကြားထားသည်မှာ ကြာပြီဟုလည်း အဆိုပါ တာဝန်ရှိသူက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
ပွင့်ဝတ်ရည် ပျိုးဥယျာဉ်ပိုင်ရှင် ဒေါ်သီတာက ''သူတို့တွေ တရားစွဲမယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့လည်း တရားပြန်စွဲသွားမယ်။ ကျွန်မတို့ အနေနဲ့လည်း ခုခံပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်'' ဟု ဆိုသည်။
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့နယ်တွင် ရဲများက မူးယစ်ဆေးဝါးများဖမ်းဆီးစဉ် လက်နက် ခဲယမ်းများ ပါဖမ်းမိ သည့် ဖြစ်ရပ် တစ်ခု ဇူလိုင် ၃၀ ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က ၎င်းတို့၏ အင်တာနက် လူမှု ကွန်ယက်မှ တဆင့် သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
ကရင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲများက ဘားအံမြို့နယ် အိန္ဒုကျေးရွာအုပ်စုရှိ သရက်ကုန်းရွာမှ ဒေါ်စိန်လေး၏ အိမ်ကို ၀င်ရောက်ရှာဖွေရာမှ ထိုသို့ပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။
အဆိုပါနေအိမ်အတွင်းမှ WY စာတန်းပါ ပန်းရောင်စိတ်ကြွဆေးပြား ၇၆ ပြားရှာဖွေတွေ့ ရှိခဲ့ပြီးထိုဆေးပြား များသည် တန်ဖိုးအားဖြင့် ငွေကျပ် နှစ်သိန်းသုံးသောင်းခန့်တန်ကြောင်း ရဲဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။
ထိုဆေးပြားများသည် အိန္ဒု-ဇာသပြင် ကားလမ်းဘေးရှိ ဖဒိုအောင်ဆန်း ဘုရားကုန်းရွာမှ ကိုအ၀င်း(ခ) ကိုအောင်ပိုင်နှင့် သူ၏အကိုဝမ်းကွဲ စောပေါင်းနောင်း(ခ)ကိုဖိုးနောင်းထံမှ ၀ယ်ယူထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း အိမ်ရှင်ကထွက်ဆိုခဲ့သည်ဟု လည်း ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
ထို့ကြောင့်ရဲများက ကိုအ၀င်း၏ အိမ်သို့သွားရောက်ရှာဖွေရာ ထိုသူကနေအိမ်မီးဖိုချောင်မှ ပစ္စတိုသေ နတ်ဖြင့်နှစ် ချက် ပစ်ခတ်ကာ ခုန်ချထွက်ပြေးသွားကြောင်း၊ ရဲများက ခြောက်လှန့် ပစ်ခတ် ဖမ်းဆီးသော် လည်း ထိုသူ လွတ်မြောက် သွားခဲ့ သည်ဟု ရဲဌာနကဆိုသည်။
သို့သော် ၎င်း၏နေအိမ်ကို ရဲများက၀င်ရောက်ရှာဖွေရာ မူးယစ်ဆေးဝါးများမတွေ့ရသော်လည်း ဒေသ လုပ်ယမ်းထောင့် တူမီး သေနတ်တစ်လက်၊ ကိုးမီလီမီတာ ပစ္စတိုကျည်နှစ်တောင့်တို့ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသဖြင့် သိမ်းဆည်းခဲ့သည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
ထို့နောက် ရဲများကကိုအ၀င်း၏အကို ၀မ်းကွဲစောပေါင်းနောင်း၏ အိမ်သို့ ဆက်လက်ရှာဖွေရာ မူးယစ်ဆေးများကို မတွေ့ရသော်လည်း ကာဘိုင်သေနတ် လေးလက်၊ ဒသမ ၃၀ ကျည် ၂၄ တောင့်၊ ကျည်အိမ်နှစ်ခု၊ M-16 မောင်းပြန်သေနတ် တစ်လက်၊ ၅ ဒသမ ၅၆ ကျည် ၂၃၀ တောင့်၊ ကျည်အိမ် အရှည်ခုနစ်ခု၊ အတို ၁၀ ခု၊ ကိုးမီလီမီတာ ပစ္စတို တစ်လက်၊ ထိုသေနတ်ကျည် ၁၈ တောင့်၊ ကျည်အိမ် နှစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့ သည်ဟု ရဲဌာနက အသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။
ထို့ပြင် ပွိုင့် ၂၂ သေနတ်နှစ်လက်၊ ယင်းသေနတ်တွင် သုံးသည့်ကျည် ၁၈၀ တောင့်၊ ကျည်အိမ်နှစ်ခု၊ လေ သေနတ် တစ်လက်၊ ၄၀ မီလီမီတာ ဗုံးသီး ၁၀ လုံးနှင့် M-16 မောင်း ပြန်ပြောင်းပို တစ်ခုတို့ကို ထပ်မံသိမ်း ဆည်းရမိသည်ဟုလည်း ရဲဌာနက ဆိုသည်။
ထိုသို့ ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက် ရဲများက စုံစမ်းတွေ့ရှိချက်များအရ နောင်အီပုံရွာမှ ဒေါ်လှရင်အေး၏ အိမ်သို့
ဆက်လက်ဝင်ရောက် ရှာဖွေရာ တန်ဖိုးအားဖြင့်ကျပ်သုံးသိန်းနီးပါးတန်သည့် WY စာတန်းပါ စိတ်ကြွဆေးပြား ၉၈ပြားကို ဖမ်းမိခဲ့သည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
ရဲများသည် အဆိုပါဆေးပြားများကို ထိုတစ်ရွာတည်းမှ ကိုသောင်းငြိမ်းထံမှ ၀ယ်ယူထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ထပ်မံသိရှိပြန်သဖြင့် ၎င်း၏ အိမ်ကိုသွားရှာရာ တူမီးသေနတ်တစ်လက်နှင့် ခဲသီးများယမ်းမှုန့်များတွေ့ရှိ သဖြင့် သိမ်းဆည်းခဲ့သည်ဟုလည်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါရှိသည်။
ရဲများက အဆိုပါဖမ်းဆီးရမိသည့်အမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ဒေါ်စိန်လေး၊ ကိုအ၀င်း နှင့်စောပေါင်းနောင်းတို့ သုံးဦးကို အိန္ဒုနယ်မြေရဲစခန်းတွင် အမှုအမှတ် မူးယစ်(ပ)၉/ ၂၀၁၃ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားပြီး မူးယစ်ဆေးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ပြစ်မှုပုဒ်မ ၁၅/ ၁၆(ဂ)/၁၉(က)/၂၀(က)/၂၁ဖြင့် တရားစွဲမည်ဖြစ်ကြောင်း ရဲဌာနက ထုတ်ပြန်သည်။
ဒေါ်လှရင်အေးနှင့် ကိုသောင်းငြိမ်းတို့ကိုလည်း အမှုအမှတ် မူးယစ်(ပ)၁၀/၂၀၁၃ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားပြီး မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ ၁၅/၁၆(ဂ)/၁၉(က)/၂၀(က)/၂၁ ဖြင့် လည်းကောင်း၊ လက်နက် ပုဒ်မ ၁၉(စ)ဖြင့် လည်းကောင်းတရားစွဲမည်ဖြစ်သည်ဟု ရဲဌာနကဆိုသည်။
ကိုအ၀င်းကို အမှုအမှတ် (ပ) ၃၂/၂၀၁၃ ဖြင့် အမှုဖွင့်ပြီး လက်နက်(ယာယီ) ပြင်ဆင်ချက် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၉ (က)ဖြင့် တရားစွဲမည်ဟုလည်း ရဲဌာနက ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရှိရသည်။
ဖုန်းဖြင့် အင်တာနက် လျှောက်လိုသူများသိရှိရန်
Posted by drmyochit Saturday, August 03, 2013, under နည်းပညာ | No comments
– O (အို)ကို စာလုံးအကြီးဖြင့်ရိုက်ရမည်ဖြစ်သည်။
– Orderdata ကို တစ်ဆက်တည်းရိုက်ရမည်ဖြစ်သည်။
– s (အက်စ်)ကို စာလုံးအသေးဖြင့်ရိုက်ရမည်ဖြစ်သည်။
မှတ်ချက် ။ ။ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု ရယူနိုင်ရန် ဝန်ဆောင်ခ ၁၀၀၀၀ ကျပ်ကို ကြိုတင် Bill မှ အလို အလောက် ဖြတ်တောက်မည်ဖြစ် သဖြင့် ကြိုတင် Bill လက်ကျန်ငွေမှာ ၁၀၀၀၀ ကျပ် အထက် ရှိရန်လို အပ်ပါသည်။ အဆင်မပြေမှု များရှိပါက MPT ၏ Call Centre ဖုန်းနံပါတ် 1876 သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင် ပါသည်။
လူပေါင်း ၆၀၀ ကျော် ရောင်းစားမှု သံသယရှိသူ မြန်မာနိုင်ငံသားကို ဖမ်းဆီး
Posted by drmyochit Saturday, August 03, 2013, under သတင်းများ | No comments
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံသား ၆၀၀ ကျော်ကို လူကုန်ကူးမှု၊ လူ ၁၀ ဦးကို သတ်ဖြတ်မှု စတဲ့ ရာဇ၀တ်မှု သံသယတွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးကို ထိုင်းအာဏာပိုင်နဲ့ မြန်မာသံရုံးတာ ၀န်ရှိသူတွေ ပူးပေါင်းပြီး မနေ့က ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။
အလုပ်သမားတွေရဲ့ တိုင်ကြားချက်အရ လွန်ခဲ့တဲ့ မတ်လကစပြီး လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်အထောက်အထားတွေ စုံစမ်းကောက်ယူပြီးတဲ့နောက် ဆူရတ်ဌာနီမြို့ ရာဘာခြံတခုမှာ သွားဖမ်းခဲ့တာပါ။
ဖမ်းဆီးရာမှာ တာဝန်ရှိသူတွေကို သူက ပြန်ပြီးခုခံလို့ ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အတွက် ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံ မြန်မာသံရုံးက အလုပ်သမားဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူုး ဦးနိုင် ထွန်းက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
“လူမှောင်ခိုကူးမှုကို လုပ်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင် ကိုမျိုးကို ဟိုနေ့က သက်ဆိုင်ရာ ရဲအဖွဲ့တွေ၊ နယ်မြေခံရဲ၊ ထောက်လှမ်းရေးရဲ၊ လူကုန်ကူးမှုရဲ အဲဒီလို ရဲအဖွဲ့ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ မနေ့က ဒီစူရတ်ဌာနီ ရာဘာခြံတောထဲမှာ သူကို အရှင် ပစ်ခတ်ပြီးတော့ ဖမ်းမိခဲ့တယ်။ တပည့်တယောက်ကို အရင်ဖမ်းမိလို့ သူ့ရဲ့ဖုန်းကို လိုက်ရင်း လိုက်ရင်းနဲ့ ဒီစူရတ်မှာ ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ မနေ့က ဖမ်းမိတာ။ သေနတ်နဲ့ ပစ်ဖမ်းတော့ သူ တင်ပဆုံထဲကို ကျဉ်ဆန်ဝင်သွားတယ်။ စူရတ်ဌာနီ ဆေးရုံမှာ သူ့ကို ချုပ်ထားတယ်။”
ကိုမျိုးရဲ့ အဖွဲ့ဝင် ၄ ဦးကိုလည်း ထိုင်းရဲတွေက ဒီကနေ့ လိုက်လံရှာဖွေ ဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အသက် ၄၂ နှစ်ရွယ် ကိုမျိုးဟာ ပဲခူးတိုင်း က၀မြို့နယ်ကဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၈ နှစ်လောက်ကတည်းက ထိုင်းနိုင်ငံထဲကို အလုပ်သမားအနေနဲ့ ၀င်ရောက်တာလို့ ဆိုပါတယ်။
သူဟာ ထိုင်းတောင်ပိုင်း တရန်းခရိုင် ကဒန် လှေဆိပ်တလျှောက်မှာ ကျင်လည်ကျက်စားပြီး အလုပ်လာလုပ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ထိုင်းငါးဖမ်းလှေပေါ် ရောင်းစားတာ၊ ခြိမ်းခြောက်၊ ဗိုလ်ကျ၊ နှိပ်စက်၊ လူသတ်၊ မုဒိမ်းကျင့်တာတွေ လုပ်ခဲ့တယ်လို့ အလုပ်သမားတွေရဲ့ အပြောနဲ့ တခြားသက်သေ အထောက်အထားတွေ ကိုးကားပြီး ဦးနိုင်ထွန်းက ပြောပါတယ်။
“မြန်မာပြည်ကနေပြီး လူတွေ ခေါ်တယ်၊ လှေပေါ်ကို ရောင်းစားတယ်။ ရောင်းစားတဲ့ဟာက ခန့်မှန်းခြေ ၇၀၀ လောက်ရှိတယ်လို့ သိရတယ်။ လှေပေါ် မတက်ချင်ဘူးဆိုရင် အဲဒီလူတွေကို သူသတ်တယ်၊ သူ့အိမ်ထဲမှာလည်း သတ်တယ်၊ လှေပေါ်မှာလည်း သတ်တယ်။ သတ်ထားတဲ့ သွေးတွေကို သူ့နံရံမှာ သုတ်ထားတယ်။ ကြိုးဆွဲချပြီး သတ်ထားတဲ့ လူတွေကိုလည်း ကြိုးတွေကို ဒီအတိုင်းထားတယ်။ အဲဒီသဘောက နောက်ရောက်လာတဲ့လူတွေကို နမှုနာပြဖို့ ထားထားတာ။ အဲဒီအချက်အလက်တွေ အကုန်လုံးလည်း ကျနော်တို့ဆီမှာ ရှိထားပြီးပြီ။ ကရင်မလေးတယောက်ကိုလည်း သူတို့အဖွဲ့
အဓမ္မ ပြုကျင့်သတ်ပြီးတော့ ပင်လယ်ထဲ ပစ်ချတယ်။
အလောင်းလည်း ဆယ်လို့ရတယ်။ ကိုမျိုးတပည့်တယောက်ကို မေးမြန်းတဲ့အချိန်မှာ အလောင်းပုံတွေ ဘာတွေ ပြတော့ သူဝန်ခံတယ်၊ ကိုမျိုးတို့နဲ့အတူတူ သတ်ခဲ့ပါတယ်လို့ ပြောတယ်။”
ဖမ်းဆီးရာမှာ ပါဝင်ခဲ့သူ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားအဖွဲ့ချုပ် ဒါရိုက်တာ ဦးကျော်သောင်းက ကိုမျိုးအနေနဲ့ ဆယ်နှစ်ကျော် ပြစ်မှုတွေ ဆက်တိုက် ကျူးလွန်လာနိုင်တာဟာ ဒေသခံရဲတွေနဲ့ အဆင်ပြေအောင် ပေါင်းသင်းနိုင်လို့ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
“ထိုင်းလ၀က အရာရှိဟောင်းတယောက်ရဲ့ မွေးစားသားအဖြစ် ခံယူထားပြီး ကျောထောက်နောက်ခံရှိတဲ့ လူအနေနဲ့ ပိုပြီးတော့ လက်ရဲဇက်ရဲ နိုင်တာပေါ့။ ဥပမာ လူ ၆၀၀၊ ၇၀၀ လောက် ဒီလှေဆိပ်ထဲမှာ လူလုပ်အား အရင်းအမြစ်ကို သူခံစားနေရတယ်။ အလုပ်သမားတွေရဲ့ ပြောပြချက်အရ တလကို ဘတ် ၈ သိန်းလောက် ၀င်ငွေရှိတယ်။ သာမန် သူဌေးတောင်မှ မစီးနိုင်တဲ့ ဘတ် သုံးသန်းကျော်လောက်တန်တဲ့ ဆိုင်ကယ် စီးနိုင်တယ်။ သူက ဒေသခံ အရာရှိဟောင်းတွေရဲ့ အကာအကွယ်ကို ယူထားပြီး အဓိက လူကုန်ကူးမှုကို လုပ်တာပေါ့။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အကြီးဆုံးပဲ။”
သွားရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖွဲ့မှာ ထိုင်းအစိုးရထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့၊ လူကုန်ကူးမှု နှိမ်နင်းရေး တပ်ဖွဲ. ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည် ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ. နယ်မြေခံ ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ စုစုပေါင်း အင်အား ၃၀ ကျော် ပါဝင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူ့ကို ဖမ်းဆီးရမိတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းတောင်ပိုင်း ဟတ်ယိုင်မြို့မှာ ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးချုပ် ချလိုမ်ယူဘန်းရုန်း ကိုယ်တိုင် ဩဂုတ် ၅ ရက်နေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့ ဦးနိုင်ထွန်းက ပြောပါတယ်။
ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်ဦး နေအိမ်သို့ ပါဆယ်ဗုံးပို့လုပ်ကြံသည်ဟု စွပ်စွဲခံရသူ ဇနီးမောင်နှံနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
၁၉၉၇ ခုနှစ် ဇွန်လ ၆ ရက်က နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ၂ ဒုဗိုလ် ချုပ်ကြီး တင်ဦးနေအိမ်သို့ ပါဆယ်ဗုံးပို့ ဖောက်ခွဲလုပ်ကြံမှုနှင့် စွပ်စွဲခံရပြီး အပြစ်ဒဏ်ပေးခံရသူ မန္တလေး မြို့မှ ကိုမိုးကျော်သူတို့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကို နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း မရှိသေးဟု ကာယကံ ရှင်များက ပြောသည်။
ကိုမိုးကျော်သူတို့ ဇနီးမောင်နှံသည် ထိုလုပ်ကြံဖောက်ခွဲမှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း မရှိကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့မှာ မတရားအပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း ခံရခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း မဇိ်္ဈမသို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုသည်။
၁၉၉၇ ခု၌ ပါဆယ်ဗုံး လုပ်ကြံမှုမှ လွတ်မြောက်ခဲ့သော ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးသည် ၂၀၀၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလက ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့အနီး ရဟတ်ယာဉ် ပျက်ကျသဖြင့် သေဆုံးသွားခဲ့သည်။
ပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်ခံရကာ လွတ်မြောက်လာပြီးနောက် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် လျှောက်ထားရာတွင် အကြောင်းအရင်း တစ်စုံတစ်ရာမသိရဘဲ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကျလာခြင်း မရှိသည်မှာ နှစ်နှစ်နီးပါး ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။ ကိုမိုးကျော်သူတို့ ဇနီးမောင်နှံအား ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် အပြစ်ဒဏ် ပေးလိုက်သည်။
ထိုဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦး၏ သမီးဖြစ်သူ မချိုလဲ့ဦး သေဆုံးသွားခဲ့ရပြီး အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် ဖောက်ခွဲမှုကို စီမံဆောင်ရွက်သူအား ဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်း မရှိဘဲ၊ နိုင်ငံတော်လုံခြုံမှုအတွက် အရေးကြီးသည်ဟုဆိုကာ ကိုမိုးကျော်သူတို့ ဇနီးမောင်နှံအား ထောင်ဒဏ်အသီးသီး အပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့သည်။
၎င်းတို့က နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သည် နိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ ရသင့်ရထိုက်သည့် အခွင်အရေးဖြစ်ရာ ထိုအချိန်က ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွင်လည်း လုံးဝ ပတ်သက်ခြင်းမရှိကြောင်း မဇ္စျိမနှင့် အင်တာဗျူးတွင် ပြောဆိုထားကြသည်။
- နိုင်ငံကူးလက်မှတ် လျှောက်တာ ဘယ်လောက် ကြာပြီလဲ။
ကျွန်တော် ပါတ်စပို့က လျှောက်ထားတာ ၁ နှစ်နဲ့ ၈ လရှိပြီ လျှောက်ထားတာ။ ဘာကြောင့် မပေးတာလဲ ဆိုတာ မပြောဘူးဗျ။ ကျွန်တော်ကတော့ ထောင်ထွက်လက်မှတ်တွေပါ တွဲပြီး တင်ထားတာပေါ့နော်။
- ဗုံးခွဲမှုမှာ ပါဝင်ပတ်သက်တယ် ယူဆလို့ မကျတာလားဗျ။
ကျွန်တော်တို့ကို ကျွန်တော့်ပုဒ်မကတော့ ပုံနှိပ် ၁၆၊ ၂၀ ကြိုးမဲ့ကြေးနန်းဖက်စ်၊ အမြန်ချောပို့စနစ်နဲ့ လိုင်စင်မရှိဘဲ သုံးလို့ပေါ့နော်။သူတို့(အာဏာပိုင်)က အမိန့်ချတာကတော့ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအတွက် အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီး အမိန့်ချတာ၊ ကျွန်တော်က အားလုံး ၁၀နှစ်၊ ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးလည်း ၁၀နှစ်ကျတယ်။ ကျွန်တော် အမျိုးသမီးက
လေးနှစ်ကျော်ကျော်နဲ့ လွတ်တယ်ခင်ဗျ။ ကျွန်တော်က ငါးနှစ်ကျော်နဲ့ လွတ်တယ်။ ပုဒ်မ ၄၀၁ ထိုးခဲ့ရတယ်။
- ဘာကြောင့် ပါတ်စ်ပို့ ချမပေးဘူးလို့ ထင်ပါသလဲ။
သူတို့က ဂဃနဏ မသိဘဲနဲ့ မပေးရဲလို့ မပေးတာလို့ ယူဆတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်ဦးအိမ် ပါဆယ်ဗုံးခွဲတယ်ဆိုတဲ့
ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်တယ် ယူဆလို့ ချမပေးတာပဲလို့ ယူဆတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လလောက်က ကို ရန်ကုန်ကို ကျွန်တော် လှမ်းမေးတယ်။ မကျသေးဘူးလို့ဘဲ ပြောတယ်။
- ဘာကြောင့် ချမပေးတာလဲလို့ မပြောဘူးလားဗျ။
မပြောဘူးဗျ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မပြောဘူးဗျ။ မကျသေးဘူး။ ၀န်ကြီးဆီ တင်ထားတယ်လို့ပဲ ပြောတယ်ဗျ။ အခု သူများတွေ လျှောက်တာ၂၄ ရက်ဆို ချပေးတယ်ဗျ။ ရန်ကုန်မှာ သွားသွားစုံစမ်းရတာ၊ မကျသေးဘူးဘဲ ပြောပြော
လွှတ်တယ်။ ကျွန်တော် စာတင်မယ်ပြောတော့။ သူတို့ဆီမှာ မတင်ပါနဲ့တဲ့၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ် တင်ပါလို့ ပြောတယ်ဗျ။
- ကိုယ့်ဟာကိုယ်တင်ဆို ဘယ်ကို တင်ရမှာလဲဗျ။
ကျွန်တော်က နိုင်ငံတော်သမ္မတဆို နိုင်ငံတော်သမ္မတဆီ တင်မှာပဲဗျ။ သူတို့ဌာနကို ပေးမတင်ဘူး။ ဘာ အကြောင်းပြချက်မှလည်း မရှိဘူးဗျ။
- ဗုံးကိစ္စက ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ ပြောပါဦးဗျ။
အဲဒါ ဒီလိုဗျ။ ဂျပန်မှာ ကျွန်တော့် ယောက်ဖရှိတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်တို့က ဂျပန်ကနေ ပစ္စည်းပို့တဲ့ လုပ်ငန်း လုပ်တာပါ။ Courier Service (ပစ္စည်းပို့ဆောင်သော ၀န်ဆောင်မှု) လုပ်တာပါ။ သူတို့ (အာဏာပိုင်) စွပ်စွဲထားတဲ့ (ကိုသောမတ်) ဆိုတာ ကုမ္ပဏီကခေါ်ထားတဲ့ ဒရိုင်ဘာတစ်ယောက်ပါ။ ကိုသောမတ်စ်က ကျွန်တော့်ယောက်ဖ ကုမ္ပဏီမှာ လုပ်တယ်ဆိုပြီး သောမတ်စ်ကို စွပ်စွဲပြီးတော့ သူကိုမရတော့ ကျွန်တော်တို့ကို ချလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံပဲဗျ။
- ဘယ်ထောင်က လွတ်လာတာလဲ။
၂၀၀၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလက မော်လမြိုင်ထောင်ကနေ လွတ်တာပါ။ မော်လမြိုင်ထောင်မှူးကတော့ မင်းတို့ကတော့ ဘာမှ မှာစရာ မရှိပါဘူးတဲ့။ စီးပွားရေးလုပ်ရင်းနဲ့ အခန့်မသင့်လို့ ကျသွားတာလို့ပဲ ပြောတယ်။ ဘာမှအထွေအထူး မပြောဘူးဗျ။ ကျွန်တော် အသက် ၂၉ နှစ်မှာ ကျတာ၊ အခု အသက် ၄၇ နှစ်ရှိပြီ။
- အကိုရဲ့ နစ်နာမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာပြောချင်လဲဗျ။
ကျွန်တော်တို့ကတော့ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ခံရတာပေါ့လေ။ ပတ်လည်း မပတ်သက်ဘူး။ သိလည်း မသိဘူးပေါ့။ သူတို့ စွပ်စွဲတာတွေ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အဆက်အသွယ် မရှိဘူးပေါ့၊ ကျွန်တော်တို့ အေးအေးဆေးဆေး စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်စားသောက်နေတာပေါ့လေ၊ ကျွန်တော်က ကလေးတွေကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ နိုင်ငံခြား ရောက်ဖူးအောင်၊ မိသားစုအနေနဲ့ ထွက်ချင်တာပါ။ ကလေးတွေတော့ပါတ်စပို့ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လင်မယား မရဘူး။ မိသားစုလိုက် လျှောက်တာ၊ ကလေးတွေကို ချပေးတယ်။
ကျွန်တော် သမ္မတကြီးဆီ စာတင်တယ်ဗျ။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ တည်ငြိမ်ရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီကိုလည်း စာတင်တယ်။ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဆီကိုလည်း တင်တယ်။ ဦးဌေးဦးဆီလည်း စာတင်တယ်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ တည်ငြိမ်ရေးကော်မတီက ဦးဝင်းမြင့်ကတော့ ဆက်လုပ်သွားပါမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းစာပြန်လာပါတယ်။ သမ္မတရုံးကို ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် သြဂုတ်လက တင်တာ၊ ၀န်ကြီး ဦးစိုးမောင်ဆီ တင်လိုက်တာ။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ပါတယ်ဗျ။ အဲဒီစာတွေက ဘာမှ ထူးခြားမှု မရှိဘူး။
- ဆက်ပြီး စုံစမ်းဖြစ်လား။
မစုံစမ်းဖြစ်တော့ဘူး။ စိတ်က ရှုပ်လာပြီ။ မန္တလေးမှာ တင်လို့မရဘူး။ ကျွန်တော်တို့ လျှောက်တဲ့အချိန်က။ ရန်ကုန်မှာပဲ လျှောက်ရတာ။ အချိန်ကုန်၊ လူပန်းဖြစ်တာပေါ့။ သမ္မတရုံးကို ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် သြဂုတ်လက တင်တာ၊ ၀န်ကြီး ဦးစိုးမောင်ဆီ တင်လိုက်တာ။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ပါတယ်ဗျ။ အဲဒီစာတွေက ဘာမှထူးခြားမှု မရှိဘူး။
နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရဲ့ အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးတာပဲ။ ကျွန်တော် အခု ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း လုပ်တယ်။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော်က ဂျပန်မှာ သွားအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေ ပြန်ပို့တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို (ပစ္စည်းပို့ဆောင်သော ၀န်ဆောင်မှု) လုပ်ကိုင်ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းလုပ်တာဗျ။ မိတ္တူကူးစက် နှစ်လုံးကို ကျွန်တော်တို့ကို ဖမ်းတဲ့နေ့မှာ သိမ်းလိုက်တယ်။
နောက်နှစ်ပတ်လောက်နေတော့ ပြန်ပို့လိုက်တယ်။ မိတ္တူကူးစက်တွေမှာ ဘာမှအပြစ် မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ ပြန်ပို့တယ်။ အမှုတည်ဆောက်လို့မရတော့ အဲဒါတွေ ပြန်သိမ်းပြီး ကျွန်တော်တို့ကို လိုင်စင်မရှိဆိုပြီး ပုဒ်မတပ်တာဗျ။ ကျွန်တော့်ယောက်ဖ ကျော်စိုးမင်းနှင့် ရန်ကုန်မှအေးဂျင့်ဆိုပြီး ရေးလိုက်တယ်။ သတင်းစာမှာ စာတိုက်ကနေ ပို့တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပဲ ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပို့တယ်ဆိုတာ မစွပ်စွဲဘူး။
- မစွပ်စွဲပဲ၊ သက်သေမပြနိုင်ဘဲ ဘာကြောင့် ထောင်ချရတာလဲဗျ။
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ကိုယ်တိုင်ပြောထားတာ၊ ဒီဟာ စာတိုက်ကနေ လာတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပဲ ပါတယ်။ ဒါဟာ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအတွက် အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီး ချပစ်လိုက်တာ။ ပုဒ်မ ကျတော့ ရိုးရိုး ပုံနှိပ် ၁၆/၂၀၊ ၁၇/၂၀ နဲ့ချတာ။ နောက် ကြိုးမဲ့ကြေးနန်းက ၆/၁ ဗျ။ ရှေ့နေလည်း ငှားခွင့် မပေးဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကို အထူးအုပ်ဆိုပြီး၊ ထောင်ထဲတင် အထူးတရားရုံးဆိုပြီး အမိန့်ချတာ။ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုလည်း မပါဘူး။ ထောက်လှမ်းရေးတွေနဲ့၊ အကျဉ်းဦးစီးဌာနက လူတွေ၊ တရားသူကြီးနဲ့ ဆွဲချတွေ ခေါ်လာပြီး ချလိုက်တာ။ ပထမတစ်ရက် အမှုစစ်တယ်။ နောက်တစ်ရက် အမိန့်ချတယ်။ နှစ်ရက်တည်းနဲ့ စီရင်တာဗျ။ ထောက်လှမ်းရေးတွေ ဖမ်းတုန်းက ကျွန်တော်က ပြောတယ်။ ကျွန်တော် အိမ်ထောင်ဦးစီးပါ။ ကျွန်တော့်ကို ဖမ်းပါ၊ ကျွန်တော့် အမျိုးသမီးကို မဖမ်းပါနဲ့လို့ ပြောတယ်။ သူတို့က နှစ်ယောက်စလုံးလိုတာဆိုပြီး ဖမ်းသွားတာဗျ။ လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကို ဒီပုဒ်မနဲ့ပဲ လုပ်တာ။
- စစ်ကြောရေးမှာ ဘာတွေကြုံခဲ့ရသေးလဲ။
အင်းစိန်အကျဉ်းထောင် အထူးတရားရုံးက ချလိုက်တာ။ စစ်ဆေးချိန်မှာတော့ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းတာ မရှိပါဘူးဗျ။ ကျွန်တော် ၂၀၀၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လထဲမှာ မော်လမြိုင် ပို့လိုက်တယ်ဗျ။
မော်လမြိုင်ထောင်ရောက်ပြီးတော့ နှစ်လ၊ သုံးလ လောက်နေတော့ ကျွန်တော်တို့ကို အကျဉ်းဦးစီး ၀န်ထမ်းတွေက ၀ိုင်းရိုက်ကြတယ်။ ညနေ ၅ နာရီခွဲလောက်မှာ လာခေါ်ထုတ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ အရိုက်ခံရတယ်။ ဗိုလ်ကြီးဟောင်း ၀င်းဗိုလ် ဆုံးသွားတယ်ဗျ။ လက်ထိပ်နောက်ပြန်ခတ်ပြီး ခေါ်သွားတယ်ဗျ။ ဗိုလ်ကြီးဟောင်း ၀င်းဗိုလ်၊ ကျွန်တော်၊ ဇော်မင်းမင်းလတ် သုံးယောက်တည်းခင်ဗျ။ သူတို့က မင်းတို့ ဗိုလ်ကြီး ၀င်းဗိုလ် မြှောက်ပေးတယ် ဘာညာ ဆိုပြီး ရိုက်တာဗျ။
ဘာမှန်းမသိဘဲ အရိုက်ခံရတာဗျ။ ဗိုလ်ကြီးဟောင်း ၀င်းဗိုလ်က အဲဒီနေရာမှာပဲ သေသွားတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ခန်းဆီ၊ မနက်ကျမှ သေမှန်း သိလိုက်ရတယ်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ထဲမှာပဲဗျ။ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းမှာ အရိုက်ခံရတာဗျ။ သစ်သားတုတ် နံပါတ်ဒုတ်တွေနဲ့ ရိုက်တာဗျ။ သူတို့ကိုင်တဲ့ ဒုတ်တွေနဲ့ ရိုက်တာ။ မီးလောင်ဖုကြီးတွေလိုပဲ ခြေထောက်တွေမှာ ဒဏ်ရာရတယ်။ သူကတော့ သေသွားတာဆိုတော့ တစ်ကိုယ်လုံး အရိုက်ခံရတာ။ မော်လမြိုင်ထောင်မှာ နှစ်နှစ်ကြာတယ်။
- နိုင်ငံကူးလက်မှတ်က အရေးတကြီး လိုအပ်နေတာလား။
အဓိကကတော့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးနေတာပေါ့နော်။ ကျွန်တော်တို့ကို အပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီး အပြစ်ဒဏ်လည်း ပေးထားပြီ၊ ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေး ကျွန်တော်တို့ ပြန်လိုချင်ပါတယ်။ အရင်အစိုးရဆိုရင် လုံးဝ မလျှောက်ဘူးဗျ။ အခုကျတော့ ဒီမိုကရေစီအစိုးရဆိုတော့၊ လျှောက်တာပါ။ လက်တွေ့မှာ ဖြစ်မလာပါဘူး။
- မတရားခံရတယ်လို့ ယူဆရင် ဘာတွေ လုပ်သွားဖို့ ရှိမလဲ။
တရားတော့ ပြန်မစွဲချင်ပါဘူးဗျာ။ ပြည်သူ၊ ပြည်သားတွေ မတရားခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာ သိစေချင်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်ဦးအိမ် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့မိသားစု လုံးဝပတ်သက်မှုမရှိဘူးဆိုတာ သိစေချင်တာပါ။ ကျွန်တော်သာ တကယ်ပတ်သက်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ဒီအချိန်ဆို ကျွန်တော်တို့သေနေလောက်ပါပြီ။ ထောင်ထဲကကို
ပြန်ထွက်လာနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ စစ်ဆေးတဲ့လူတွေကလည်း ပြောပါတယ်။ မင်းတို့မှာ ဘာအပြစ်မှမရှိပါဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ သူတို့ကလည်း အထက်က ခိုင်းတဲ့အတိုင်း လုပ်ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
- အစ်မ စစ်ကြောရေးရောက်တုန်းက အတွေ့အကြုံတချို့ ပြောပြနိုင်မလား။
ကျွန်မတို့ကို လာခေါ်သွားပြီး စစ်ကြောရေးမှာ နှစ်ပါတ်၊ အဲဒီမှာ စစ်ပြီးတော့ ထောင်ထဲကို ပို့လိုက်တယ်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလဆန်းမှာ အမိန့်ချလိုက်တယ်။ ၁၀ နှစ် အပြစ်ပေးခံရတယ်။ နှိပ်စက်တာ မခံရပါဘူး။ အင်းစိန်အချုပ်တိုက်မှာ မသီတာ၊ ဒေါက်တာဒေါ်မေ၀င်းမြင့်၊ ဒေါ်စန်းစန်းတို့နဲ့ နေခဲ့ရတယ်။ လေးနှစ်နဲ့ ရှစ်လနေပြီး လွှတ်လာခဲ့တယ်။ အဆင်မပြေတာတွေ များပါတယ်။ အိမ်က နှစ်ပါတ်တစ်ခါ လာတွေ့တယ်။ ဘုရား၊ တရား လုပ်ပြီးနေခဲ့တယ်။
- အစ်မ ဘာတွေ ဆုံးရှုံးခဲ့ရလဲ။
ကျွန်မ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အကုန်လုံး ဆုံးရှုံးတာပေါ့၊ ကျွန်မ စီးပွားရေးနဲ့ ကျောင်းပြီးသွားပြီ၊ ကျွန်မ အမျိုးသားက ရန်ကုန်မှာ အလုပ်လုပ်တယ်။ ကျွန်မက သူအလုပ်သွားရင် အနောက်က လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ထောင်ထဲမှာနေတုန်းက ကျွန်မမိဘက မော်လမြိုင်ပြောင်းရတယ်လေ။ ကျွန်မတို့ ထောင်ထဲမှာနေတော့ ကျွန်မတို့ကို ပေး
မတွေ့ဘူး။ ကျွန်မ ထောင်ထဲမှာ ကျန်းမာရေး သိပ်မကောင်းပါဘူး။ ပိန်လည်း ပိန်တယ်။ အစားအသောက်လည်း သိပ်မစားနိုင်ဘူး။ နှလုံးရောဂါရှိတယ်။ ထောင်ဆရာဝန်နဲ့ ပြပေးတယ်။
- အဲဒီအချိန်တုန်းက အာဏာပိုင်တွေကို ဘာပြောချင်မလဲ။
သူတို့(အာဏာပိုင်)တွေ လုပ်လိုက်လို့ ကျွန်မတို့ဘ၀ အကုန်လုံး ဆုံးရှုံးသွားတယ်လေ။ ထောင်က ထွက်လာတော့ အကုန်လုံး အစကနေပြန်စရတယ်။ အများကြီး ဆုံးရှုံးသွားတယ်။ ကျွန်မရင်ထဲမှာတော့ မကျေနပ်ဘူးလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်
မဇ္ဈိမ၊ နေမျိုး |
ခြံစည်းရိုးကာရာမှ ဖြစ်ပွားသည့် မင်းဓမ္မပန်းဝင်းပဋိပက္ခကြောင့် လူငါးဦး ဒဏ်ရာရရှိ
ရန်ကုန်မြို့တော်ပန်းဥယျာဉ်နှင့်အားကစားကွင်းများဌာနမှ စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီမှ ၀န်ထမ်း များသည် မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၄ ရပ်ကွက်၊ မင်းဓမ္မလမ်းနှင့် တော်ဝင်လမ်းထောင့်ရှိ ပန်းဝိုင်းအား ခြံစည်း ရိုးကာခြင်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေစဉ် ပန်းဝင်းနေထိုင်သောပန်းဥယျာဉ်နှင့်ပျိုးပင်လုပ်ငန်းရုင်များနှင့် အချင်းများ မှုများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၄ ရပ်ကွက်၊ မင်းဓမ္မလမ်းနှင့် တောင်ဝင်လမ်းထောင့်ရှိ မင်းဓမ္မပန်းဝင်းအား သြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့ မနက် (၂း၀၀) နာရီခန့်ကတည်းကပင် စည်ပင်ဝန်ထမ်းများသည် ခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်း လုပ်ငန်း များကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြခြင်းပြီး မနက် (၇း၃၀) နာရီတွင်ဝန်းအတွင်းရှိ ပန်းပင် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် သူများက ခြံစည်းရိုးမခတ်ရန် ပြောဆိုရာမှ ပြဿနာဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“သူတို့က မနက်၂နာရီလောက်ကတည်းက ရောက်လာပြီး ခြံစည်းရိုးတွေခတ်နေတာ။ ၀င်းထဲကလူတွေ အကုန်လုံး ကလည်း အိပ်နေတော့ ဘယ်သူမှမသိကြဘူး။ တ၀န်းလုံးပိတ်ဆို့ပြီး မနက် ၅ နာရီလောက်မှ သိရ တာပါ” ဟု ၀င်းအတွင်းနေထိုင်သော အမျိုးသားတစ်ဦးကပြောသည်။
အဆိုပါပန်းဝင်းအား ပန်းဥယျာဉ်နှင့် အားကစားကွင်းများဌာနမှ ၎င်းတို့သတ်မှတ်ပေးထားသော မြေနေ ရာဖြစ် သည့် သာကေတ မြို့သို့ ဧပြီလမှစတင်ကာ ပြောင်းရွေ့ခိုင်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်ထိ မပြောင်းရွေ့သေးသောကြောင့် ထိုနေရာအား စည်ပင် အလုပ်သမားအင်အား ၁၅၀ ကျော်ခန့်နှင့် စည်ပင်ရဲများ၊ ပန်းဥယျာဉ်ဌာနမှ ဌာနမှူးဦးကိုကိုလင်းနှင့်ဝန်ထမ်းများက ခြံစည်းရိုးများ လာရောက် ကာရံရာမှ ယခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ဒီမှာ ကျွန်မတို့အတွက် လမ်းပေါက်လေးတော့ ဖွင့်ပေးထားပေးပါဦးဆိုပြီး ကျွန်မတို့တွေက ၀င်းထိပ်မှာ ရပ်ပြီးတော့ မေတ္တာ ရပ်ခံတာပါ။ အဲဒါကို သူတို့ဘက်နေစပြီးတော့ ခဲတွေနဲ့ပစ်တယ် ၀ါးချွန်တွေ နဲ့လည်း ထိုးပြီး အကြမ်းဖက်တဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ဆောင် သွားတာပါ”ဟု နော်ဝတီပန်းဆိုင်မှ ဒေါ်နီဝါလွင်က ပြောသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်ကြောင့် ပန်းဝင်းနေ ပြည်သူ ၅ ဦး ဒဏ်ရာရရှိပြီး လူငယ်တစ်ဦးနှင့် ကျောင်းသူတစ်ဦးတို့အား မြောက် ဥက္ကလာ ဆေးရုံသို့ တင်ပို့ထားရကြောင်း သိရသည်။
“အစ်မရဲ့ဆွဲကြိုးလည်း ပျောက်သွားတယ်၊ သူတို့ဘက်က ၀ါးလုံးချွန်နဲ့ လှမ်းရိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကာလိုက်တာ လက်မှာ လည်း ကွဲသွားတယ်၊ လက်စွပ်လည်း ပိန်သွားတယ်”ဟု တက်နေလင်း ပျိုးဥယျာဉ်မှ မတင်တင် လှက ပြောသည်။
မင်းဓမ္မပန်းဝင်းအား ပြောင်းရွှေ့ရန် လွန်ခဲ့သည့်တစ်လခွဲလောက်ခန့်ကပင် ထပ်မံပြောဆိုထားသော်လည်း ပန်းဝင်း အတွင်း ဆိုင်ရှင် ၄၀၀ ကျော်ခန့်က မပြောင်းရွေ့သေးသောကြောင့် လျှပ်စစ်မီးများ ၊ ရေများကို ဖြတ်တောက် ထားခဲ့ကြောင်း ပန်းဝင်း အတွင်း နေထိုင်သူများ ထံမှ သိရသည်။
“သူတို့ပြောင်းခိုင်းတဲ့နေရာနားက လျှပ်စစ်တာဝါတိုင်လည်းရှိတယ်။ မြေအောက်မှာ ဂတ်စ်ပိုက်လိုင်းတွေ လည်း ရှိ တယ်။ မြေနေရာကလည်း ဒီလောက် မကျယ်တော့ ဘယ်လိုစိုက်ပျိုးမလဲ။ သင့်တော်တဲ့နေရာ မျိုးကို ပဲ ပြောင်းပေးစေ ချင်တာပါ” ဟု ပန်းဆိုင်ရှင်များက ပြောသည်။
၂၀၀၀ ခုနှစ်ကတည်းကပင် ဌာနမှထိုနေရာအား ချထားပေးခဲ့ပြီး သစ်ပင်စိုက်ပျိုးသူများကို ပန်းပင်များ လာရောက် စိုက်ပျိုး လုပ်ကိုင်စေခဲ့ပြီး ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ပန်းပွဲတော်များ ထိုနေရာ၌ ကျင်းပခဲ့ပြီး ရန် ကုန်မြို့ အတွက် လိုအပ်သည့် ပန်းပင်များကို ပန်းဝင်းမှ အဓိကရရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။
“ဥပဒေမှာ လူတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ ခန္တာကိုယ်နဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကို အန္တရာယ်ပြုထိပါးလာပြီဆိုရင် သေသည် အထိ ခုခံကာကွယ် ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်”ဟု ရှေ့နေများကွန်ရက်မှ ရှေ့နေဦးကြီးမြင့်ကပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်များနှင့် ပက်သက်၍ ပန်းဥယျာဉ်နှင့် အားကစားကွင်းများဌာနမှ ဌာနမှူး ဦးကိုကိုလင်းသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ ပြန်လည်ဖြေကြားမှုမရှိခဲ့ပေ။
ကျောင်းသားငါးဦး စာသင်ခန်းရှိ သောက်ရေအိုးမှ ရေသောက်ပြီး အဆိပ်သင့်မှု စစ်ဆေးနေ
ရန်ကုန်- စာသင်ခန်းအတွင်းရှိ သောက်ရေအိုးမှ ရေကိုသောက်ပြီး ကျောင်းသားငါးဦး အစာ အဆိပ် သင့်မှုဖြစ် ခဲ့၍ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာန၊ ပညာရေးဌာနတို့နှင့် ပူးပေါင်းကာ စစ်ဆေးနေကြောင်း အင်ပင်မြို့နယ် ရဲစခန်းမှ သတင်းရရှိသည်။
ဟင်္သာတခရိုင် အင်ပင်မြို့ နယ် တောင်ပတ်လည်ရွာ မူလတန်းကျောင်းတွင် ဇူလိုင် ၂၄ ရက် က ဖြစ်ပွား ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနေ့ နံနက် ၇ နာရီခန့်က ကျောင်းဝင်းအတွင်း ပိုးသတ်ဆေးနံ့ရရှိနေသောကြောင့် စစ်ဆေး ရာ သူငယ်တန်းအခန်း သောက်ရေအိုးထဲမှ ပိုးသတ်ဆေးပြားတစ်ပြားတွေ့ခဲ့ရပြီး ကျောင်းအုပ် ဆရာမကြီး သုံးသော ရေနွေးဓာတ်ဘူးအတွင်းမှ ရေများမှာလည်း ပိုးသတ်ဆေးနံ့များ ထွက်နေခဲ့ကြောင်း ကျောင်းသား မိ ဘတစ်ဦးက ပြောသည်။
“ကျောင်းကို အစောကြီးရောက်တဲ့ ကလေးငါးယောက်ကတော့ ရေသောက်မိပြီး ဗိုက်အောင့်တာတွေ၊ အန်တာတွေဖြစ်ခဲ့လို့ ဆေးခန်းပြခဲ့ရတယ်။ အဖြစ်မှန်ပေါ်အောင် ရဲစခန်းကို အကြောင်းကြား ထားပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
မြို့နယ်မှ ဆရာဝန်တစ်ဦး၏ စစ်ဆေးချက်အရ သောက်ရေအိုးထဲမှရသော ဆေးပြားမှာ ပိုးသတ်ဆေးပြား မဟုတ်ဘဲ ပါရာစီတမောကဲ့သို့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးပြားဖြစ်နိုင်ကြောင်း သုံးသပ်ထားပြီး အဖြစ် မှန်ပေါ်ပေါက်အောင် ဆက်လက်စုံစမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း အင်ပင်ရဲစခန်းမှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။
“ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ကျောင်းသားမိဘနဲ့၊ ကျောင်းစောင့်တွေကြားမှာ လူမှုရေးပြဿနာအချို့ ရှိနေတယ်လို့ သိရပါ တယ်။ ဖြစ်စဉ်ကို သေချာစုံစမ်းသွားမှာပါ” ဟု အဆိုပါ ရဲအရာရှိက ပြောသည်။
ဇူလိုင် ၂၄ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဆယ်ရက်ခန့်ကြာသည်အထိ အကြောင်းရင်းမှန်ကို မသိ ရသေးကြောင်း မိဘများအနေဖြင့် ကလေးများအား ကျောင်းသို့စေလွှတ်ရန် စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေရကြောင်း ကျောင်းကော် မတီဝင် တစ်ဦးက ပြောသည်။
လင်မယားချင်းစကားများရာက မယားကိုဓါးဖြင့်ခုတ်ပြီး မိ...
မင်းဓမ္မပန်းကွင်းကို စည်ပင်အင်အား ၆၀၀ ခန့်ဖြင့် ခြံ...
လူပေါင်း ၆၀၀ ကျော် ရောင်းစားမှု သံသယရှိသူ မြန်မာနု...
ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်ဦး နေအိမ်သို့ ပါဆယ်ဗုံးပို့လုပ...
ခြံစည်းရိုးကာရာမှ ဖြစ်ပွားသည့် မင်းဓမ္မပန်းဝင်းပဋိပ...
ကျောင်းသားငါးဦး စာသင်ခန်းရှိ သောက်ရေအိုးမှ ရေသောက်...